Ubuntu 16.04 LTS iya kushiya iCatalyst / Crimson kwaye iya kubonelela kuphela ngabaqhubi basimahla (AMDGPU) | Ubunlog
UMiquel Perez | | Ubuntu
Sekuyiminyaka eliqela ukusukela oko Ubuntu bungene kwimpikiswano apho kubonakala ngathi akunakuphuma. Ngaba isoftware Ubuntu isimahla kangakanani? Nditsho utata wayo yonke le ntshukumo, URichard Stallman, uze kugxeka i-distro enika ibhlog yethu igama layo ngokunika abasebenzisi ithuba lokufaka abaqhubi abanelungelo kwinkqubo.
Ewe kubonakala ngathi iCanonical ithathe inyathelo elikhulu ukuya kwiSoftware yasimahla. Kwaye kunjalo ngo-Ubuntu 16.04 LTS, abaqhubi abanelungelo lokuthengisa iRadeon (Catalyst) baya kuphelelwa lixesha, ke kwelinye icala, Ubuntu izakuqala ukusebenzisa kuphela abaqhubi bemizobo yasimahla, ezinje nge-AMDGPU.
Kunyaka ophelileyo, i-AMD Sele ebheja kakhulu kuMthombo ovulekileyo nakwisoftware yasimahlangokusebenzisa GPU vula.
Sonke siyayazi inkathazo ebiyizisile CatalystKucacile ukuba ukuba umdwelisi wenkqubo unokusebenzisa kwaye ajonge ikhowudi yemvelaphi yeendlela zokuqhuba zemizobo, kwaye ngenxa yoko enofikelelo kwi-API enamandla, uphuhliso lwesoftware lunokufikelela kwinqanaba eliphezulu kakhulu lomgangatho kunye nokusebenza kakuhle. Kwaye le yeyona njongo iphambili yeGPUOpen, ukunika umdwelisi nkqubo ithuba lokuba fumana uninzi kwi-GPU, Ngokuqokelela izinto ezibonakalayo, nazo zonke iintlobo zezixhobo zemveliso zasimahla ngaphandle kwendleko.
Ngamaxesha amaninzi ndifake Ubuntu kubahlobo okanye kusapho, kwaye iingxaki abagqibe ukuba nazo ngeCatalyst zihlala kunzima ukuzisombulula. Ngamaxesha aliqela, imeko yemizobo yezicelo ezininzi ngequbuliso iyekile ukusebenza, okanye kwimo engqongileyo yedesktop uqobo, kwanokufomatha kweyona meko imbi. Isisombululo besisoloko sihleli sinye; faka abaqhubi basimahla, nto leyo edla ngokuphelisa ingxaki ngokupheleleyo.
Kwaye njengoko besitshilo, abaqhubi basimahla bagqibela ngokufumana okuninzi kwiiGPU zethu. Izicelo esizisebenzisa kakhulu (ukusuka kwisikhangeli ukuya nakowuphi na umdlalo wevidiyo) zinokuthatha ithuba lokufumana amanqaku akumgangatho osezantsi we-GPU, sizenze zibe zezona zilungileyo.
Ukulandela ifilosofi efanayo, iCanonical igqibe ekubeni Ubuntu 16.04 izakuphatha inguqulelo ye-AMDGPU 4.4 LTS kwikernel yakho (Linux 4.5). Nangona kungeyiyo yonke into eya kuba yinzuzo. Ukuba kukho naziphi na izinto ezimbi ezinokuchazwa kwesi sigqibo, kukuba abasebenzisi be-AMD ziya kuxhaswa kuphela ukuya kwi-OpenGL 4.1, kwaye nabaqhubi abanelungelo baya kuba nokufikelela kuhlobo lwe-4.5.
Nangona kunjalo, ngokokubona kwam, nantsi indlela ekufuneka u-Ubuntu ayilandele, uhlala ebambe isandla seSoftware yasimahla kunye nokususa, kungaze kulunge, kuzo zonke ezo zinto ziphunyezwa kwinkqubo enikezela indlela yokusebenzisa iSoftware yabucala. Siyathemba ukuba uzithande iindaba njengokuba nathi senzile. Sishiye uluvo lwakho kwicandelo lamagqabantshintshi
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 16.04 LTS izakushiya iCatalyst / Crimson kwaye ibonelele kuphela ngabaqhubi basimahla (AMDGPU)
Andiliqondi eli nqaku, liyinto engaqhelekanga. Kodwa ke, ungasoloko ufake umqhubi welungelo ngokusebenzisa enye i-.deb, kuba Ubuntu yi-debian kodwa i-crappy.
URodrigo Heredia sitsho
Inyani yile yokuba andizithandi iindaba, ndikhetha abaqhubi abanini.
Phendula uRodrigo Heredia
Ikhadi lam yiNVIDIA. Ndiyathemba nje, ngenxa yabasebenzisi, ukuba abaqhubi basimahla abavela kwi-AMD abafani neNouveau enganyamezelekiyo yeNVIDIA (icotha njengehashe le-baddie).
Ndisoloko ndineengxaki ekukhawuleziseni i-3d kunye nabaqhubi basimahla, bobabini nge-HD7770 yam okanye i-R9 280 yam. Ukuba ufuna ukwenza oku. Akufanelekanga ukuba balungise le ngxaki kuqala?
Ndine-amd apu kwaye emva kokufaka i-kubuntu 16.04 kwaye ndisebenze kakubi kunye ne-desktop, i-linux ngaphambi kokuba uphole, kwenzeka ntoni kuwe? Sisigqibo esibi ukushiya abaqhubi babucala ngaphandle kokusombulula iimpazamo ezibangelwe kukushiya kubo, bendinoluvo olulungileyo nge-linux distros kodwa emva kokuhamba kweyona idumileyo kwaye ndisithi i-linux ibe yinkqubo yenkunkuma, yeka ukuba isekwisigaba se-alpha.
Uyenza njani i-USB ebukhoma ngeLinux kwi-Ubuntu